Shixnadaha Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha - Shirkadaha Tooska ah Qiimaha | YTO POWER
Tag Archives: Qalabka Korantada taagan
Qalabka Korantada taagan
matoorrada korantada dhaliya-10KW-YD380D
• Lagu kalsoonaan karo: Dhammaan matoorada taxanaha ah way dhaafeen inkabadan 2000 saacadood oo tijaabo cimri dherer ah.
• Raaxo: vibiation yar iyo dhawaq yar
• Dhaqaalaha: isticmaalka shidaalka oo hooseeya iyo isticmaalka saliida.
• Ilaalinta deegaanka ： Dhamaan waxay la kulmaan shuruudaha sii deynta mashiinka naaftada ee Shiinaha, wax soo saarka qaar waxay la kulmaan Mareykanka, Yurub, Hindiya iyo dalal kale shuruudaha sii deynta.
• Shahaadada: IS09001-2000, TS-16949, EPA, E-MARK, CPCB, CE Shahaadooyinka.
matoorrada korantada dhaliya-11KW-YD385D
matoorrada korantada dhaliya-14KW-YD480D
matoorrada korantada dhaliya-17KW-YND485D
matoorrada korantada dhaliya-21KW-YSD490D
matoorrada korantada dhaliya-24KW-Y490D
matoorrada korantada dhaliya-27KW-Y495D
matoorrada korantada dhaliya-30KW-Y4100D
matoorrada korantada dhaliya-33KW-Y4102D
matoorrada korantada dhaliya-38KW-Y4105D
matoorrada dhalinta tamarta-48KW-Y4102ZLD